बिहे पछी मात्रै महिलामा आउने यस्ता अनाैठा परिवर्तन कारण थाह पाउदा पर्नुहुनेछ अच्चमित ! – Sanjal Nepal
Homeसमाचारबिहे पछी मात्रै महिलामा आउने यस्ता अनाैठा परिवर्तन कारण थाह पाउदा पर्नुहुनेछ अच्चमित !
December 19, 2020 admin समाचार 2450
प्राय जसो बिहे पछी महिलाहरुको शारीरिक परिवर्तन हुनु स्वाभाविक नै मानिन्छ । विशेष गरि बिहे पछि महिलाको जिन्दगीमा धेरै परिवर्तन आउँछ । उनीहरुको बोली चाली देखि हरेक कुरामा परिवर्तन देख सकिन्छ ।साथै बिवाह पछी महिलाहरुको शरीरमा पनि परिवर्तन देखिन्छ । सामान्य तय अन्य महिलाको तुलनामा विवाहित महिलाको हि`पको आकारमा धेरै परीवर्त भएको देख्न सकिन्छ । हाम्रो देशमा सामान्यतय महिलाहरु सानै उमेरमा शारीरिक विकास नभएकै बेला बिवाह गर्छन।
त्यस कारणपनि बिहेपछी हिपको साइज बढ्नु अथवा ठुलो हुनु सामान्य मानिन्छ । ।अमेरिकामा एक सोधकर्ताहरुले भने भिन्नै तथ्य पत्ता लगाएका छन् । हिपको आकार ठुलो भएका महिलाहरुलाई गर्भवती हुदा खासै समस्या नहुने समेत एक अनुसन्धानले बताइएको थियो । बिहेपछि महिलाहरु किन धेरै मोटाउछन् । किन यति धेरै परिवर्तन आउँछन् । यस्ता छन् कारणहरु :-अनिन्द्राः- बिहेपछि धेरैजसो महिलाहरूको सुत्ने समय र दैनिकी बद्लिन्छ ।
थपिएको जिम्वेबारी बहन गर्दा गर्दै सुत्नको लागि पर्याप्त समयको अभावमा धेरैपटक अनिदो बस्नु पर्ने हुनसक्छ । कम्तिमा ७ घण्टा नसुत्नुको कारणले महिलाहरूको तौल बढ्ने गर्दछ ।। हर्मोनको परिवर्तनः- बिहे पछि परिवर्तन हुने जिवनशैली तथा चाहानाका कारण महिलाहरूको शरिरमा हर्मोन तिब्र रुपमा परिवर्तन गराउँछ, जुन तौल बढाउन जिम्मेवार छ । उमेरको असरः- विभिन्न अनुसन्धानका अनुशार बिहेपछि बढ्दो उमेर सँगै महिलाहरूको मेटा`बो`लिजमको दर कम हुदै जान्छ ।
जस कारण शरिरमा भएको बोसोको घट्ने प्रकिया कम हुन्छ र तौल बढ्छ ।।सामाजिक दबाब कम हुनुः- महिलाको लागि बिहे अघि राम्रो देखिन तथा राम्रो पती पाउनका लागि आफ्नो शरिरको फिटनेसलाई विशेष ध्यान दिएका हुन्छन् तर बिहे पछि यो दबाब कम हुन्छ , जसकारण महिलाहरु आफ्नो फिटनेसमा ध्यान दिदैनन् र तौल बढ्न जान्छ । ।धेरै टिभी हेर्नुः- प्रायजसो बिहे पछि हाम्रो समाजमा श्रीमान कामका लागि बाहिर जान्छन् भने श्रीमती गृहणी को रुपमा घरमै बस्ने प्रचलन रहेको छ। दिउसोको खाली समयमा टेलिभिजन हेर्नु उनिहरुको सामान्य दैनिकी कुरा हो ।
जसबाट उनिहरुको शरिर शारिरिक रुपले निष्क्रिय रहने हुदाँ मोटोपन बढ्छ । गर्भवती अवस्थाः- सामान्यतया बिहे भएको १–२ बर्ष पछि धेरैजसो जोडीहरु सन्तान जन्माउने गर्दछन। महिला गर्भवती हुँदा आउने हर्मोनको परिवर्तन तथा चुस्त पोषणको कारणले मोटोपन बढ्ने गर्दछ ।।लापर्वाहीः- बिहेअघि महिलाहरु आफ्नो खानपिनलाई नियन्त्रणमा राखेका हुन्छन। तर बिहे पछि जिवनशैलीको कारण खानपिनमा खासै ध्यान दिन पाउदैन्न त्यसैले तौल बढ्छ । यसैगरी चिसो बढेपछि तातोपानीमा नुहाउनेको भीडसमेत बढेको छ ।
April 27, 2021 admin समाचार 4753
तपाईंको शरीरले जति वी’ र्य बनाउँछ, त्यस हिसाबले जीवनभर एउटै से’ क्स पा’ र्ट’ नर हुनु उति राम्रो आइडिया पक्कै होइन । यसको सदुपयोग गर्ने हो भने त से ‘क्स पा’ र्टनर बढीभन्दा बढी हुनुपर्ने
December 24, 2020 admin समाचार 3255
November 23, 2020 admin समाचार 2525
अरेबियन महिलाहरुको छाला अन्य देशका महिलाहरुको तुलनामा धेरै सुन्दर र स्वस्थ्य हुन्छ । यी महिलाहरुको छाला मात्र हैन कपाल पनि उत्तिकै सुन्दर हुन्छ । सुन्दरताको कुरा गर्दा अरबेयिन महिलाहरुको प्रसंग जोड्ने गरिन्छ । हुनपनि बान्की